Maxaad Socdaalka By Tareenka waa mid bay'ada | Save A tareenka
Home > Safarka tareenka > Maxaad Socdaalka By Tareenka waa mid bay'ada
Maxaad Socdaalka By Tareenka waa mid bay'ada
Tilmaamaha Safarka Eco, Safarka tareenka
gaadiidka tareenka waa habka ugu deegaanka-friendly in ay u safraan. saamayn lagu koriyo ah ee gaaska ah halkii kiiloomitir gaadiidka tareenka waa 80% ka yar baabuurta. Wadamada qaarkood, Ka yar 3% gaadiidka oo dhan gaaska ka tareenada iman. Hababka keliya bii'ada badan tareenada ayaa la socda oo baaskiil. Waxaa waxaa sababo badan oo doorashada inay ku socdaalaan tareenka waa bay'adda u fiican oo aan jeclaan lahaa in kuwan kula wadaagi!
A line tareen caadiga qaadi karaan 50,000 dadka saacadiiba. this barbar dhigtaa haadka wado banaan, oo ka guurto karaa oo kaliya 2,500 dadka saacadiiba.
Qoraal uu wadaagay Nigel C Williamson (@therealnigelcw)
Marka imaanayn gaadiidka la rail, kharashka dibedda, qayladii, wasaqowga hawada, shilalka, iyo sii kaabayaasha, iyo ciriiriga fog hoose on Tareenada badan oo isticmaalaya baabuur khaas ah.
guuxa – Maxaad doorashada inay ku socdaalaan tareenka waa bay'adda
Wasakhda sawaxanku waa saamaynta xun ee buuqu ku yeesho dadka iyo xayawaanka. Waa natiijada tooska ah ee saboolka ah qorshaynta magaalooyinka. Dhibaatooyinka iyo qayladii dib taariikhda wasakhda in qadiimiga Rome! maanta, guuxa ka baabuurta u keeni karaan waxyeelo gobolka nafsi dadka. Calaamadaha waxaa ka mid ah dhiig-karka, heer-sare stress, tinnitus, khalkhal hurdo, iyo saamaynta kale waxyeello.
Currently, waxaa jira tallaabooyin si aad u xaddido saamaynta qaylada jidka. tallaabooyin ka mid ah caqabadaha qaylada, yareysey xawaaraha gaadiidka, beddelo texture jidka, iyo sidoo kale gacanta ku taraafikada in awood socodka gaadiidka siman. Taas macnaheedu waa in baabuurta ee nidaamka xakamaynta taraafikada ee ay u baahan doonaan in la isticmaalo biriiga iyo dardargelinta yar.
tareenka waa bay'adda iyo in ay muhiim tahay. Hindiya waa in aad aragto iibka baabuurta sii kordhaysa on sannad walba. Shiinaha la saadaaliyo in ay leeyihiin 300 million baabuurta wadada by 2030. Duulista iyo safarka markab ayaa sidoo kale ku daray in ay naqaska CO2 caalamka. Waxay u muuqataa in ka mid ah oo dhan hababka gaadiidka, tareenada kaliya ayaa yareyn karaya qiiqa iyo waarta mustaqbalka.
baabuur koronto iyo Hybrid waa cad deegaanka u fiican badan baabuurta dhaqanka, laakiin dhibaatada maanta waa in baabuurta kuwani waa mid aad u qaali ah in la iibiyo heer in dheelli doonaa cawaaqibta xun ee baabuurta.
tareenada naaftada iyo tareenada korontada
Waxaa jira farqi u dhexeeya naaftada tareenada iyo korontada tareenada. tareenada Electric dhaadheer 20-35% kaarboon kayar tareenada naaftada. tareen A waa tareenada gaar ahaan Electric bay'adda u fiican in ay ku shaqeeya by tamarta la cusboonaysiin karo iyo dalab sodcaalladoodii carbon-free. Wasakhda ka soo tareenada ee Europe hoos u dhigi doontaa by dheeraad ah a 50% by 2030. Tirooyinkan waa weyn tan iyo tareenada warsan 8.5% dhaqdhaqaaqa safarka oo dhan.
Cologne si Tareenadu Frankfurt
Munich in ay Tareenadu Frankfurt
Hanover in Tareenadu Frankfurt
Hamburg si Tareenadu Frankfurt
Qoraal uu wadaagay Dave Wheeler (@davewheelerstudio)
Tareenada ama diyaaradaha – sababta doorashada inay ku socdaalaan tareenka waa bay'adda
Shey muhiim ah goorma barbar tareenada in diyaarado waa in diyaarado u baahan tahay si ay u isticmaalaan lacagta la yaab leh Shidaalka duushay oo soo degtey labada. Sidoo kale, oo markii dadkii safri diyaarad, waxay u muuqdaan in ay u hesho in ay garoonka diyaaradaha baabuur by. Tani waxay ku darayaa in naqaska CO2 ay safarka. Taas ayaa ka dhigaysa qaadashada ah tareen Intercity a no-brainer deegaanka.
Waxaa jiray qaar ka mid ah horumar ugu dambeeyey, gaar ahaan loogu talagalay dadka safraya ganacsi kuwaas oo ku wargeliyay by wakiilada safarka saameynta carbon duulimaadyada ay ku. Sidoo kale, ka ah deegaanka uu leexan, waa wax aad u adag in gaadho xarumaha magaalada baabuur by, halka, haddii aad tahay on tareen, aad leedahay si toos ah xarumaha iyo nawaaxigeeda helitaanka. Tani, inta badan, Waxa kale oo ka dhigan tahay in si deg-deg waa inay ku socdaalaan tareenka badan hab kasta oo kale oo.
Gebogebadii, tareenku waa mid deegaanka u roon iyo habka ugu haboon ee jawiga u fiican ee lagu safro sidoo kale wuxuu siiyaa sahlanaanta dadka u socdaalaya ganacsi iyo raaxo labadaba. Kororka baabuurta wadada ka dhigan tahay in ciriiriga iyo wasakhda yihiin kororka iyo tareenada waa jawaab gaadiidka in ay ilaaliyaan deegaanka ah.
Ma waxaad doonaysaa in la iibsado tigidhada tareenka oo aan ajuurada jaale? Tag www.saveatrain.com si ay u helaan heerarka tareen jaban.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa fr si de ama waxa iyo luuqado badan.
#korontada deegaanka tareen safarka safarka
The Trip Tareen First Ever Made In Italy